- बादल चोरीः सुन्दा अचम्म पढ्दा दंग
बादल चोरीः सुन्दा अचम्म पढ्दा दंग
चोरी के केमा हुन्छ, बहुमूल्य वस्तु, अहिले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यक्ति तथा राष्ट्रका बहुमूल्य दस्तावेज चोरी भएका छन् । पश्चिमा जगतमा मायाप्रेममा निद्रासम्म पनि चोरी भएको सुनिएको हो । हावा चोरी वा बादल चारीको कुरा सुन्दा कस्तो लाग्ला ? पताउन सकिएला ?
भर्खरै बादल चारी भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलिएको छ । व्यक्तिले होइन एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको हिउँ र बादल चोरी भएको आरोप लगाएको छ । यस्तो आरोप इरानले इजरायलमाथि लगाएको हो । इरानका ब्रिगेडियर जनरलले इजरायलले इरानमाथि रहेको बादल तथा हिउँ चोरी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रश्न उठ्ने नै भयो यो कसरी सम्भव होला ? इरानका ब्रिगेडियर जनरल प्रमुख गुलाम रजा जलालीले इरानमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनमा इजरायल शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन् ।
। इरानमा सुख्खा लाग्नुलाई उनले इजराजयलमाथि दोष लगाएका छन् ।
उनले इजरायलले इरानमा वर्षा नहोस् भन्ने चाहेको पनि बताएका छन् । युरोपियन राष्ट्रमाथि पनि यस्तै आरोप छ । यद्यपि इरानी मौसम विभाग उनको यो कुरासँग सहमत छैन ।
अफगानिस्तान तथा भूमध्य सागरको बीचमा रहेको २२ सय मिटरको पहाडी हिस्सा हिउँले ढाकिंदै आएको छ । इरानमा भने यस्तो अवस्था छैन । यो कुरालाई जलालीले पनि उठाएका छन् ।
इरानका कोही अधिकारीले बादल चोरीको आरोप लगाएको पहिलो घटना भने होइन । सन् २०११ मा पूर्व राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजादले पश्चिमा देशका कारण इरानमा सुख्खा लागेको बताएका थिए । उनले युरोपेली देशले एक विशेष किसिमको उपकरण प्रयोग गरेर बादललाई आफ्नो नियन्त्रणम लिएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।— एजेन्सी